Daawo+ Dhageyso: Xaflad Aad U Heersaraysa Oo Lagu Caleemo Saaray Ugaaska Beesha Maxamed Subayr. – Calamada.com
Daawo+ Dhageyso: Xaflad Aad U Heersaraysa Oo Lagu Caleemo Saaray Ugaaska Beesha Maxamed Subayr.
calamada August 4, 2016 2 min read
Dhageyso Xalqada Koowaad Barnaamijka Caleemo saarka.
Dhageyso Xalqada Labaad Barnaamijka Caleemo saarka
Goobta lagu qabtay xafladda caleemo saarka ayaa ahayd mid si heersare ah loo diyaariyay oo quruxdeeda aad ku arki kartaan sawiradda hoose .
Xafladda caleemo saarka waxa kasoo qayb galay marti sharaf aad u badan oo ka kala yimid dhammaan wilaayada jubbooyinka iyo meel ka baxsan intaba, sidoo kala waxa kasoo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsanaa Mujaahidiinta Xarakada Alshabaab, sida waaliga wilaayada Jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallaah iyo waaaliga wilaayada Shabeelaha Hoose Sheekh Maxamed Abu Usama.
Sidoo kale waxaa dadkii goobta xaadiray aad usoo jiitay sida loo diyaariyay barnaamijka,Culimadii ayaa hadashay, suldaankii ayaa hadlay, salaadiintii ayaa soo dhawaysay, waaliyaashii ayaa hadlay,Â waxyaabaha dadka soo jiitay waxa ka mid ah inÂ wilaayadu suldaanka gudoonsiisay,Â Baabuur, Qori Ak47 ah, kitaab quraan ah iyo dhiil caano ah,Â suldaankunaÂ inta uu ammaanka ka jaray ayaa saddex xabbo oo darandoori ah cirka u riday.
Waxa kale oo xusid mudan in sidii lagu yaqaanay caleemo saarka salaadiinta waawayn,Â geel aad u badan goobta laguÂ laayay ooÂ hilibka iyo caanaha meel kala dhigo la waayay, waxana lagu soo gunaanaday ciyaar dhaqameed odayaashu si fiican u yaqaanaan oo jaanta la isla helay, kadibna waxa duca isla taagay Sheekh Cismaan Dacwah, oo ugaaska iyo ummadii goobta isugu timidba u duceeyay.
Runtii masoo koobi karo Shucuurka iyo farxadda meesha taallay waxanad uga bogan kartaa inaad dhageysato barnaamijka isla markaana aad daawato sawirradan Hoose.
Â Hoos ka daawo Sawirada xafladda.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 01-11-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacada Islaamiga Andalus 01-11-1437 Hijri.